Madaxweynaha Soomaaliya oo tacsi u diray Xildhibaankii Shalay Muqdisho lagu dilay – STAR FM SOMALIA
Star FM: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyskii, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed geeridii Allaha u naxariistee Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Maxamuud (Bantu) oo kooxo hubeysan ay maanta ku dileen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa ku tilmaamay xildhibaanka la dilay inuu yahay shahiid loo dilay howsha uu hayay qaranka. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray inuu aad uga xun yahay dilka Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Maxamuud, isagoo sheegay in dilalka noocaas ah aanay marnaba ka hor istaagi doonin in horey loo sii dhaqaaqo. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu hubo in dalka laga ciribtiri doono dhowaan kooxo uu sheegay in ay nabadda ka soo horjeedaan.
Madaxweynaha ayaa marxuumka Ilaahay uga baryey inuu naxariistii janno ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan ka siiyo.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay mas’uul ka aheyd dilkii Xildhibaankan iyo labo kale oo ilaalo u aheyd, xilli ay marayeen degmada Wadajir, iyadoo dableydii ka dambeysa dilka oo gaari saarneyd ay baxsadeen.
Marxuum Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Maxamuud ayaa waxaa uu baarlamanka ku soo biirey dhowaan, isagoo beddelay aabihii oo horaantii sannadkan geeriyooday.